Oxygen nkpuchi Manufacturers & Suppliers - China Oxygen nkpuchi Factory
Oxygen Mask bụ ihe aerosol na-ekpuchi na ikuku oxygen na-ekpuchi ọnụ na imi ma tinye ya na tankị oxygen. A na-eji ihe mkpuchi ikuku oxygen nye ume ikuku oxygen na ngụgụ ndị ọrịa. Igwe ikuku oxygen na-egosipụta eriri na-agbanwe agbanwe na obere imi imi nke nwere ike ime ka ọ dabara nke ọma n'ọtụtụ nha ihu. Oxygen Mask na tubing na-abịa na 200cm oxygen ọkọnọ tubing, na doro anya na juu vinyl na-enye akwa ndidi nkasi obi na-enye ohere visual ntule. Oxygen Mask na tubing dị na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ uzo.
Tracheostomy bụ obere oghere site na akpụkpọ ahụ dị n'olu gị n'ime windpipe (trachea). A na-etinye obere ọkpọ rọba, nke a na-akpọ tracheostomy tube ma ọ bụ tube trach, site na oghere a n'ime trachea iji nyere aka mepee ụzọ ikuku. Mmadu na-eku ume iku ume site na tube a, karia isite onu na imi.